"Nageenya maatii keenyaaf waan yaaddofneef barnoota dhaabne galuuf dirqamne" - BBC News Afaan Oromoo
"Nageenya maatii keenyaaf waan yaaddofneef barnoota dhaabne galuuf dirqamne"
Goodayyaa suuraa "Barattoota abbaa, haatiifi firri irraa du'aa jirutu jira, haala kanaan barnoota itti fufuu hin dandeenyu."
Yunivarsiitii Ambootti barataa 'Makanikaal Injinariingi' waggaa sadaffaa kan ta'e Daraaraa Diidaa, barattoota naannoo Booranaa 130 kaampaasiiwwan sadan yuunivarsiitii Amboo gadhiisanii gara bakka dhaloota isaaniitti deebi'an keessaa isa tokko.
Daraaraan akka jedhutti waraana uummata Booranaa daangaa somaalee jiranirratti banamee jiruun nageenyi maatiisaa isaa yaaddessinaani kan barnoota dhiisee Booranatti deebi'uuf dirqame.
''Dhimmi barnoota nu dhiisise lola daangaati. Daangaarratti ajjeechaan sukkaneessaan raawwataa jira. Barattoota abbaa, haatiifi firri irraa du'aa jirutu jira. Haala kanaan barnoota itti fufuu hin dandeenyu. Ajjeechaan maatii keenyarraa hin dhaabanne'' jechuun Daraaraan BBC'tti himeera.
Ajjeechaawwan ji'oota saglan darban naannoo Booranaatti raawwatamaniif qaamnii itti gaafatamummaa fudhate jiraachuu dhabuusaarraas koomii qaba.
Yeroo ammaa barattoonni dhalattoota Booranaa Yunivarsiitiilee garagaraa keessatti argaman mooraa barnootaa gadhiisanii bahaa jiru.
''Rakkoo naannoo Booranaatti uumameefi lubbuun namootaa darbuu balaalefachuun guyyaa Wiixataa Sadaasa 27, 2017 mooraa keessatti gadda keenya ibsannee," kan jedhu barataan Yuunivarsiitii Haramaayaa BBC'n dubbise tokko, ijoolleen naannoo Booranaa hedduun waa'ee maatii isaaniif yaadda'uun gara maatii deebii'uuf bahan, Yoos ijoolleen Oromoos rakkoon keessan nus ni ilaallata jechuun isaan duukaa baane'' jedha.
Goodayyaa suuraa "Nageenya maatii keenyaaf waan yaaddofneef barnoota dhaabne galuuf dirqamne"
Yuunivarsiitii Jimmattis barattoonni damee Teeknoloojii yunivarsiitichaa meeshaaleen deeggarsa barnootaa gahaa ta'an hin jiran jechuun yeroo dheeraaf barnoota dhaabanii komachaa turan.
Osoo inni furmaata hin argatiin dhimmi qormaata raggaasisaa gahumsaafi ajjeechaan uummata Oromoo Booranaa itti fufuun ammoo barattoonni kaanis akka barnoota dhaaban sababa ta'eera.
"Rakkoolee akka nuuf furamaniif gaafanne irratti waraanni mooraa yuunivarsiitichaa, doormii barattootaa seenee hidhaa fi reebicha hamaa barattoota irratti raawwachaa jira," jechuun barataan Yuunivarsiitii Jimmaa tokko BBC'tti himee jira.
Yunivarsiitii Madda Walaabuuttis, barnoonni erga dhaabatee torbee sadaffaa keessa jira. Barataan mooraa Yunivarsiitii gadhiisee torbee darbe gara maatiisaatti debi'e tokko akka jedhutti, gaaffiin isaanii inni jalaqabaa qormaata mirkaneeffannoo gahumsaa fudhachuu hin qabnu kan jedhu ture.
Bakka hanqinni meeshaalee deeggarsa barnootaafi hanqinni gahuumsa barsiisotaa jirutti qormaata kana fudhadha jechuun sirrii miti jedha barataan kun.
Kanarratti ajjeechaan uummata Booranaa dabalamuun barattoonni barnoota qalbiin hordofuullee waan hin dandeenyeef dhaabanii akka gara maatiisaaniitti galaniif sababa biroo ta'eera jedha baratichi.
Yunivarsiitii Wallagaattis barattoonni Booranaa barnoota dhiisanii yoo bahan, barattoonni biroos isan duukaa Mudde 4, 2017 barnoota dhaabanii jiru.
Furmaanni isaa maali?
Mariin barattoonni Yunivarsitiwwan kunniin mata dureewwan komii isaanii irratti pirezidaantota yunivarsitii isaanii waliin taasisan fala hin finne.
Ministeerri barnootaa dhimma kana irratti yaada qabu gafachuuf yaaliin taasifnes hin milkoofne.
Barattoonni naannoo Booranaa yunivarsiitiiwwan garaa garaa keessatti baratan BBC'n dubbise, namoota ajjechaa Booranatti rawwatame keessaa harka qaban motummaan seeratti akka dhiheessuufi tasgabbii naannoo dangaa jirus akka kabachiisu gaafataniiru.
Akkasumas, hooggantoonni Mootummaa Naannoo Oromiyaas haala naannoo sanaa irratti hawaasa waliin akka mari'atu kan barbaadan ta'uus dubbatu.
Yunivarsitilee kunneen keessatti barattoonni barnootatti akka deebi'aniif seerri adda addaa bahaa jiru.
Gucni galmee irra deebii Yunivarsiitiin Jimmaa barattoonni guutanii akka barnootatti deebi'an barattootaaf raabse, barattoota hedduu biratti fudhatama hin arganne.
Barattoonni BBC'n dubbise, barnootaatti kan deebiinu yoo gaaffiin keenya deebii argate qofaadha jedhu.
Goodayyaa suuraa Guca galmee irra deebii Yuunivarsiitii Jimmaa
Sababni barattoonni mooraa gadhiisaniif inni guddaan lola daangaa keessumaa naannoo Booranaatti lubbuun darbaa jiraachuu ta'uu kan himan Pireezidantiin Yunivarsiitii Haroomayaa Pirofeesar Camadaa Dhinsaa, "gaaffileen barattoonni kaasaa jiran sadarkaa sadarkaan qaama mootummaatiin deebi'aa waan jiruuf barattoonni baruumsa isaaniitti akka deebi'an hojii bala'aa hojjechaa jirra," jechuun EBC'tti himaniiru.
Hanga Jimaataattis barnootatti ni deebi'uu jenne abdanna jedhu.
Yunivarsitileen akka Haroomayaa, Madda Walaabuufi Jimmaa barattootni barnootatti akka deebi'an waamicha gochaa osoo jiranii, Yunivarsiiti Wallaaggaatti ammoo barattoonni barnoota lagachuuf murteesuun isaanii dhimmichi babal'achaa deema yaaddoo jedhu uumeera.
Dhimma gaaffilee barattootaa kanaratti deebii dabalataa barbaacha Pireezidantoota Yuunivarsiitiilee kanneenifi qondaaltota Ministeera Barnootatti irra deddeebiin bilbillee yaaliin goone nuuf hin milkoofne. Gariin bilbila hin kaasan, gariin ammoo wal-gahiirra jiraachuu nutti himan.
Barattoota Yuun. Jigjigaa: ''Odaan waraqaa eenyummaa keenyarra jiru dararaaf nu saaxile''